June 25, 2019 - ThutaStar
သမီးလေးကြောင့် စိတ်ဓါတ်ကျအားငယ်တိုင်း ယုံကြည်မှုပြန်ရလာတယ်ဆိုတဲ့ ချမ်းချမ်း….
June 25, 2019 Thuta Star 0
အဆိုတော် မလေး ချမ်းချမ်း ဟာဆိုရင် ပရိသတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ဦးပါ။ သူမက ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးနဲ့အတူ အနုပညာအလုပ်တွေကြိုးစားလုပ်ရင်းဘဝကို အေးချမ်းစွာ ဖြတ်သန်းနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိုမိုလေးရဲ့ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ချမ်းချမ်း က သူမရဲ့ သမီးလေး နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ချမ်းချမ်းက […]
အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာခ ချွေတာနိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်အချက်များ…..
မီတာခတွေ ဈေးတက်တယ်တဲ့ စကားစမိကြတယ်။ ၂.၃၅% ကနေ ၂.၄% ထိတက်သွားတာခြွေတာသင့်တယ်။ ဘယ်လိုခြွေတာကြမလဲ Brainstrom လုပ်ကြနဲ့ပေါ့။ ဒါနဲ့တစ်ယောက်ကပြောပြေတယ်။ သူ့အဒေါ်တွေအိမ်မှာ မီတာခ တစ်လကို ၃၀၀၀ကျပ်ပဲကုန်တယ်တဲ့။ အံ့သြလို့ ဒါဆိုတစ်လကို ယူနစ် ၁၀၀ပဲသုံးလို့ပေါ့။ ယူနစ်၁၀၀များသူတကယ်သုံးရင် အခုဆို နှုန်းအသစ်နဲကဆို ၂၂၅၀ပဲကျမှာဗျား ၀.၆၄% လျော့သွားမှာ။ […]
ချစ်သူနဲ့ ဘာကြောင့်လမ်းခွဲရတယ်ဆိုတာ သင်ဇာဝင့်ကျော် ပြောပြီ …
ချစ်သူနဲ့ ဘာကြာင့်လမ်းခွဲပြတ်စဲသွားတာလဲ ဆိုတာကို ပြောပြတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် ပုရိသယောက်ျားတွေ မက်မောရလောက်ပီး မိန်းကလေးတိုင်းလည်း အားကျရလောက်တဲ့ Sexy ကျတဲ့ အမိုက်စား ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ရုပ်ရှင်ကားတွေ ဗီဒီယိုတွေ MTV တွေမှာလည်း အောင်မြင်မှု ရယူထားတဲ့ မင်းသမီး သင်ဇာဝင့်ကျော်ကတော့ လတ်တလောမှာ သူ့ရဲ့ချစ်သူနဲ့ လမ်းခွဲလိုက်တာကြောင့် […]
ဂီတပညာရှင် ဦးစောနုက အထိမခံရွှေပန်းကန်ကြီး လုပ်နေစရာမလိုဘူးတဲ့….
The Voice Myanmar season2ပြိုင်ပွဲကြီးက ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပေမယ့် မပြီးဆုံးနိုင်သေးတဲ့ ဂယက်တွေကတော့ ယခုတိုင်ကျန်ရှိနေဆဲပါ။ အဲ့တာကတော့ The Voice Myanmar ရဲ့ Fianl Show ညမှာ Team NiNi ရဲ့အဖွဲ့ဝင် Hazel ရဲ့သီဆိုယှဉ်ပြိုင်ခဲ့မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Hazel က […]
ဆိုနင့်မိတယ် …. အလုပ်မှာ ဝိုင်းပြီးGayလို့ဝန်ခံခိုင်းခဲ့တာကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်သေသွားတဲ့မြေးလေးမောင်ကျော်ဇင်ဝင်းကို စောင့်နေတဲ့ အဖွား…
အဖော်အချွတ်တွေမလုပ်ဘဲ နာမည်ကြီးနေတဲ့ မြန်မာမင်းသမီး (၁၂) ယောက်..
Sexy ကျတယ်ဆိုတာ အဖော်အချွတ်တွေ လုပ်မှ Sexy ကျတယ်ဆိုပြီး လွဲမှားနေကြတဲ့ သူတွေရှိပါတယ်။ ဖော်မှ ချွတ် မှ နာမည်ကြီးမယ်ဆိုပြီး လွဲမှားတဲ့ အတွေးတွေ ရှိနေကြတဲ့ သူတွေလည်း အများကြီးပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး ထိပ် တန်း မင်းသမီးတွေထဲမှာ အဖော်အချွတ်တွေ မလုပ်ပဲ နာမည်ကြီးနေတဲ့ […]
ကျွန်မအနေနဲ့ အခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတော့ ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ဘာလို့ကျွန်မ အခုမှရှင်းရလဲဆိုရင် ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း အရမ်း Shocked ရနေတယ်။ မောင်လေး ဆုံးပါးသွားတဲ့အတွက်လည်း အရမ်းကိုယူကြုံးမရဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ကိစ္စကိုသိသိချင်းမှာလည်း နေ့လည်ကနေညထိ မောင်လေးကျော်ဇင်ဝင်းရဲ့အိမ်ကိုသွားပြီး မောင်လေးရဲ့အဖွားနဲ့အဒေါ်ဖြစ်သူတို့နဲ့ပါ တူတူရှိနေခဲ့ပြီး မိသားစုဝင်များကိုရှင်းပြခဲ့ပြီး လိုအပ်တာတွေကိုလုပ်ပေးနေတာကြောင့် ခုချိန်မှရှင်းပြနိုင်တာပါ။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းထူပူနေခဲ့တာကြောင့် အခုမှ ဒီ post […]
အနုပညာလောကထဲမှာ အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေပြီး ရေပန်းစားနေကြတဲ့ သွေးသားရင်းချာမောင်နှမ (၈) ဦး…
အနုပညာလောကထဲမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့ မောင်နှမတွေများစွာရှိကြပါတယ်။ အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်လာကြပုံချင်းမတူကြပေမယ့် အောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတာချင်းတူညီကြတဲ့ အနုပညာရှင်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ သွေးရင်းချာတွေဖြစ်သလို ရုပ်ရည်တွေလည်းချောမောလှပလွန်းကြတဲ့သူတို့ဟာ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာအောင်မြင်နေကြသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ မောင်နှမ (၂) ယောက်လုံးအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူသလို ဆန်းရှိမှလည်း နှစ်ဦးလုံးအောင်မြင်ကြမှာဖြစ်ပေမယ့် ခုဖော်ပြပေးမယ့်သူတွေကတော့ တချို့က အနုပညာမှာအောင်မြင်ပြီးသားသူတွေဖြစ်နေကြသလို အချို့တွေကတော့ သိပ်မကြာခင်မှာ အနုပညာလောကထဲကိုဝင်ရောက်လာကြတော့မယ့် မောင်နှမသားချင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ၁ လွှမ်းပိုင်၊ […]
အူတက်အောင်ခွီနေရမယ့် လေးဖြူဆိုထားတဲ့ “တကျော့နှစ်ကျော့တေးကိုသီ” သီချင်း…
လတ်တလော The Voice Myanmar Season2Final Show မှာတေ့ာ Top4ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ Hazel ရဲ့ နောက်ဆုံးသီဆို ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာဂန္တဝင် သီချင်းကြီး “တကျော့နှစ်ကျော့ တေးကိုသီ” ဆိုတဲ့ သီချင်းကတော့ သူ Version […]
(ရှင်း မလိုလိုနဲ့ ရှုပ်နေသူများအတွက်) တိုးမြှင့်လိုက်တဲ့ မီတာခ တွက်ချက်ပုံများ ….
တိုးမြှင့်လိုက်တဲ့ မီတာခ တွက်ချက်ပုံများ (ရှင်း မလိုလိုနဲ့ ရှုပ်နေသူများအတွက်) မီတာခများ နှုန်းထားပြင်ဆင် လိုက်ပါပြီ…။ အရင်တုန်းကနဲ့ အခုနှုန်းသစ် ဘယ်လို ကွာမလဲ ဆိုတာကို အကြမ်းဖျင်း တွက်ဆနိုင်ဖို့ တွက်ချက်မှု ဇယားပါ…။ ဒါကတော့ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ နှုန်းတွေပါ။ အရင်က ၂၀၀၀ လောက်ကျနေတဲ့ အခြေခံ […]